के तपाइलाइ टाउको दुख्ने समस्या छ ? सधैँ यस्ता कुराहरूबाट टाढा रहनुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
टाउको दुख्दा सधैँ पेन किलर खाँदा तपाईको दुखाई एकपटक मात्रै निको हुन्छ । केही दिन, महिना पछि तपाईको टाउको फेरि दुख्न थाल्छ ।टाउको दुखाइका कारणहरु धेरै हुन्छन् । तपाईमा स्नायु सम्बन्धी समस्या तथा अन्य रोगहरु छ भने पनि टाउनको दुख्न सक्छ ।
टाउँको दुख्ने कारणहरुमा माइग्रेन पनि एउटा प्रमुख कारण हो । त्यसैले टाउनको दुख्दा पेन किलर खानुभन्दा राम्रोसँग विशेष चिकित्सकको परामर्शमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी दुखाइको कारण पत्ता लगाउनु दीर्घकालीन उपचार हो ।
चिकित्सकहरुका अनुसार टाउको दुख्ने समस्या लिएर अस्पताल पुग्ने मध्ये ३० प्रतिशतमा माइग्रेनको समस्या हुने गर्छ । माइग्रेन भनेको न्यूरो भाष्कुरल कन्डिसन हो । मस्तिस्कमा हुने रक्तनली सुन्निएर वा फुलेर नसाहरु तन्किन्छ । जसका कारण टाउको दुख्ने समस्या हुन् ।
लगातार टाउको दुखिरहन्छ ? यी घरेलु उपचार अपनाउनुहोस्
तीब्र रुपमा बदलिएको र भाड दौडले भरिएको जिन्दगीमा टाउको दुखाई एक साधारण समस्या बनेको छ यद्यपी लगातार टाउको दुख्छ भने यसले तपाईंको कार्यक्षमता र तपाईंको पूरै दैनिकीलाई प्रभावित गर्ने गर्दछ ।
टाउको दुखाईको लागि घरेलु उपचारः
आजकाल टाउको दुखाई हरेक मानिसहरुको समस्या बन्ने गरेको छ । यसबाट पार पाउनका लागि मानिसहरु विभिन्न प्रकारको औषधीको सेवन गर्ने गर्दछन् । तर यस्तो समस्यालाई घरेलु तरिकाले पनि ठिक गर्न सकिन्छ । आउनुहोस्, यसबारे जानकारी लिऔं ।
ल्वाङ र नुनको पेष्टः
दालचिनी पाउडर पेष्टः
कागती र तातो पानीः
लसुनको रस पिउनुहोस्ः
धनियाँ, जीरा र अदुवाको रस पिउनुहोस्ः
तात्तातो मसाला चियाः
लगातार टाउको दुखिरहन्छ भने यसलाई तात्तातो मसाला चियाले राहत प्रदान गर्दछ । यदि तपाईं मसाला चिया बनाइरहनुभएको छ भने त्यसमा थोरै अदुवाका साथै अलैंची पनि हाल्नसक्नुहुन्छ ।
आजभोलि टाउको दुख्ने बिरामीहरुको संख्या अस्पतालमा बढेको छ । तर, यसको उपचार सम्भव कति छ भन्नेबारे विज्ञानले अहिलेसम्म कुनै उत्तर दिएको छैन । केही वर्ष यता सिटी स्क्यान, एमआरआइजस्ता उपचार पद्धति पनि प्रयोग हुन थालेका छन् ।तैपनि कयौं अवस्थामा टाउको दुख्नुको कारण पत्ता लाग्न सक्दैन ।
त्यसो त टाउको दुख्नु आफैंमा एउटा रोग हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन । अन्य रोगहरुका कारण पनि हाम्रो टाउको दुखिरहेको हुनसक्छ । जे होस्, टाउको दुखेर अस्पताल पुगेका बिरामीहरुका लागि चाहिँ डाक्टरहरुले लामो समय दिएर उनीहरुको कथा सुनेकै हुनुपर्छ ।
त्यसमाथि टाउको दुख्ने समस्या कुनै गम्भीर रोगको लक्षण पनि हुनसक्छ । जस्तो कि ज्वरो आउनु पहिले, रुँघाखोकी लाग्नु पहिले पनि टाउको दुख्न सक्छ । कहिलेकांही हाम्रो रक्तचाप अत्यधिक बढ्दा पनि हाम्रो टाउको दुख्न सक्छ ।
तर, ब्लड प्रेसर बढ्दा टाउको दुख्ने समस्या चाहिँ २० प्रतिशत बिरामीमा मात्र देखिने चिकित्सकहरु बताउँछन् । अरु रोगका कारण वा समस्या कारण हुने टाउको दुखाइलाई सेकेन्डरी मानिन्छ । तर, टाउको दुख्ने नै समस्या पनि छुट्टै रोग पनि हुनसक्छ ।
माइग्रेन एउटा त्यस्तै रोग हो जसमा टाउको दुखिहाल्छ । तर, केही अवस्थामा टाउको दुख्नु चाहिँ निकै खतरानक हुनसक्छ ।यस्तो अवस्थामा तत्काल वा जतिसक्दो छिटो चिकित्सककहाँ पुग्नु राम्रो मानिन्छ ।
Don't Miss it सोप किन खाने ? यस्त छन् साेप खादाका फाइदै फाइदा, जान्नुहाेस्
Up Next याद गर्नुहाेस् ! यस्ता कारणहरूबाट हुन सक्छ ब्लड क्यान्सर, जान्नुहाेस्